Ukuhlasela okuholwe u-De Villiers kuphindisele ama-Proteas endleleni
Standard Bank Proteas batsman AB de Villiers
Ngabe ubani obenosuku lokuqala olungcono lwe-Freedom Series e-PPC Newlands ngoLwesihlanu ngeke kucace kuze kungenwe osukwini lwesibili. Ama-Standard Bank Proteas azithole ku-12/3 emuva kokunqoba i-toss nokukhetha ukushaya kuqala ngaphansi kwesimo esinengozi kuma overs amathathu anzima kuphosa u-Bhuvneshwar Kumar kodwa u-AB de Villiers ebesakhona kwi-crease.
Leli sosha lama-Proteas elibuyayo liqale ngokuhlasela ukucacise ngomoya wayona yonke i-innings njengoba yena nokapteni wakhe, u-Faf du Plessis, behlanganise i-partnership yama-runs angu-114 esize ama-Proteas athole u-107/3 kwi-session yokuqala no-123/4 kwi-session yesibili.
Bagcine ku-286 nge-rate ecishe ibe ama-runs amane nge-over ngathi idlule akade bekulindele emuva kohafu wehora wokuqala emdlalweni.
i-India iqede usuku ku-28/3 kodwa besebelahlekelwe i-wicket yakapteni, u-Virat Kohli, kwibhola lokuqala lika-Morne Morkel, engena emuva kokushintshwa kuka-Vernon Philander no-Dale Steyn phakathi kwabo abakhiphe abavulela i-India umdlalo.
Njengenjwayelo kungcono ukusho ukuthi iliphi iqembu elingaphambili uma womabili amaqembu esewadlalile ama-innings abo okuqala kodwa sekuphume ama-wicket angu-13 kuma-runs angu-314 emdlalweni kuyela ngaphambili ngokushesha futhi akukho okusho ukuthi isimo sokushaya sizobalula. Kodwa i-pitch ingashesha – okushiwo u-Du Plessis ngesikhathi echaza isinqumo sakhe sokushaya kuqala – futhi i-inconsistent bounce ingabakhona ngohafu wesibili womdlalo.
Kusasekuqaleni komsebenzi ka-Ottis Gibson njengomqeqeshi wama-Proteas kodwa, uma kukhulunya ngosuku lwanamhlanje, uletha isitayela se-Calypso eqenjini olusuka kubo e-Caribbean. Okokuqala ama-Proteas akhethe ukuhlasela ngokuthatha abaphosa ngokushesha abane kanye ne-spin sika-Keshav Maharaj, okwesibili iqembu likhethe ukushaya kuqala njengoba bekungangcono ukuphosa kuqala, futhi okwesithathu abashayayo bashaye o-4 abangu-39 kanye no-6 ababili, abangenise imali engu-R79 500 kwi-Sunfoil Education Trust (SET) kuma-boundaries, o-six kanye nama-wicket.
Kuhlangane njengosuku olujabulisayo futhi olujabulise izihlwelwe azicishe zibe u-15 000.
U-De Villiers no-Du Plessis bashaye ama-boundaries angu-10 ekuhlanganiseni o-50 babo futhi lokhu kulandelwe u-60 ohlanganiswe u-Quinton de Kock no-Philander nge-wicket yesithupha kuma-overs ayisishagalolunye.
Kuphinde kwaba nencazelo yabadlali kuma-wicket partnership okuqala amahlanu ehlanganisa ama-runs angu-142 nalawa okugcina amahlanu ehlanganisa u-144.
Ukuhlasela kwe-India bekuholwa u-Kumar oyisebenzelile i-five-wicket haul kodwa wagcina ethole u-4/87 kuma-overs akhe angu-19. U-Jasprit Bumrah, odlala umdlalo wakhe wokuqala wama-Test, uqale umsebenzi wakhe nge-wicket ka-De Villiers kwathi okwenza konke, u-Hardik Pandy, naye ukhiphe umlenze.
Kodwa bazocabanga ngokudedela ibhola kuka-Shikhar Dhawan kwi-slip yesithathu okuvumele u-Maharaj ahole umsila nge-innings yama-runs angu-35. Izinto ezifana nalezi ezingaveza ukuthi iliphi iqembu elizophumelela.
Ukukhetha iqembu okunzima kakhulu lokhu - u-Du Plessis u-Philander ubuyele emdlalweni